कपालको चाया कसरी हटाउने ? यस्ता छन् घरेलु उपाय – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
काठमाडौं । अधिकांश मानिसलाई कपालमा पर्ने चायाले सताउने गरेको छ । अक्सर शह¥रमा बस्ने मानिसहरुलाई चायाले सताउने गरेको छ ।विशेषगरी धुलो धुँवा, प्र¥दूषित पा¥नी, गुणस्तरीयहिन साबुन र स्याम्पुका कारण चाया पर्ने गर्छ । तर, यसबाट छुटकरा लिन केही तरिका उपयोगी हुन सक्छ ।
यी हुन् घरेलु तरिका:– तोरीको तेलले कपाल मसाज गर्ने । मसाज गरेको आधा घण्टा पछि तातो पानीमा तौलिया भिजाएर राम्रोसँग निचोर्ने अनि कपालमा बेर्ने । यसो गर्दा कपालको रोमछिन्द्र खुल्छ । यसो गरेको १५ मिनेट पछि कपाल नुहाउने ।
– नरिवलको तेलमा कपुर मिला¥एर कपा¥लको जरा सम्म पुग्ने गरी मसाज गर्ने ।– कागतीको रसमा मरिच मिसाउने र कपालको जरासम्म पुग्ने गरी लगाउने ।– अमि¥लो द¥हीमा बेसन मिसाएर कपालमा लगाउने अनि एक घण्टा पछि कपाल पखाल्ने ।
– चुकन्दरको पातलाई पा¥नीमा उमाल्ने । उमा¥लेको पानीले कपाल नुहाउने ।– ग्लिसिरिङ र गुलाब जल मिसाएर हरेक बिहान कपालमा लगाउने र केही बेरपछि कपाल धुने ।– अण्डाको पहेँलो भागमा अमि¥लो दही मिसाउने र कपालमा लगाएको आधा घण्टापछि टाउको धुने ।
Previous गर्मीको याममा नरिवलको पानी खानुका यस्ता छन् अचम्मका फाइदा !
Next १० करोड मेयर र ५० लाख वडाध्यक्षको लागि जम्मा गरिसके भन्दै टिकट माग्न थालिसकेः उपेन्द्र यादव